भावना पाठक शुक्रबार, मंसिर २६, २०७७, १३:४३:००
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा )भित्र पछिल्लो समय आन्तरिक विवादले राम्रै स्थान पाउन थालेको छ। हामी नेपालका कम्युनिष्ट एकै ठाउँ भन्ने जुन नारा र अभियानका साथ नेकपा एमाले र नेकपा माओबादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको थियो त्यसको औचित्य कम हुँदै गएको प्रष्टै देखिन्छ।
शुरुका महिना हातमा हात र काँधमा काँध जोडेर एक अर्का बिना बाच्नै नसक्ने नवविवाहित दम्पति झैँ देखिने केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल "प्रचण्ड" अब सम्बन्ध बिच्छेदको संघारमा पुगेका दम्पति झैँ देखिन थालेका छन्।
चुनावमा जनतासंग नगर्नु बाचा गरिहाले एकीकरण त गर्नु नै थियो। प्रचण्डले आफु रहनको लागि,स्वयम् प्रचण्ड बाँच्नको लागि माओबादी केन्द्रको अस्तीत्व मेटाए भने ओलीले आफु सर्वेसर्वा हुन्छु भन्ने अठोट गरेरै हाँ मा हाँ मिलाए।
राजनैतिक वृतमा सार्है चतुर मानिने ओली र आफुलाई बुद्धिमान सम्झने प्रचण्ड दुवै आफु ठुलो भन्न पछि पर्दैनन् । एकीकरणकै बेला अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदको लागि झगडा नभएको हैन तर ओलीले पालै पालोको सिद्धान्त अपनाउने दुवै जना मिलेर खाने रणनीति अपनाए । प्रचण्ड आखिर पदको लागि नै एकिकृत भएका थिए उनले नाइँ भन्ने कुरै आएन।
शुरुका दिन राम्रै भएपनि पार्टी भित्र केपी ओली हावी हुन थालेपछि प्रचण्डलाई सह्य भएन । उनले केपी ओली बिरुद्ध आफु निकट व्यक्ति अनि गुट समक्ष दुख नपोखेका हैनन् तर ओलीले त्यसलाई सुनेको नसुन्यै गरेर अगाडी बढिरहे।
बिबादले राम्रै रफ्तार लिरहेको थियो। ओलीलाई आफु सर्वेसर्वा हुँ भन्ने अहंकार थियो भने प्रचण्डलाई म पनि बराबरी हुँ भन्ने घमण्ड थियो। प्रचण्डले ओलीलाई बिभिन्न कार्यक्रमका बीच आफुले एकीकरण गरेर गल्ती गरेको जस्तो आशय भएको अभिव्यक्ति दिंदै हिडे।
ओली पक्ष र प्रचण्ड पक्षबीच जुहारी नै चल्यो। त्यसैको फल स्वरुप पुर्व माओबादी पक्षका प्रखर नेता एबम सभामुख कृष्ण बहादुर महरा काण्ड आइलाग्यो। महरा नेकपामा बलियो पकड भएका नेता मानिन्थे । उनलाई रोशनी शाही नाम गरेकी एक महिलाले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको आरोप लगाइन। उनी जेल पनि गए पछि निर्दोष साबित भएर पुन आफुलाई पुरानै लयमा फर्काउने चेष्टा गरिरहेका छन्।
यो थियो ओली पक्षको पहिलो प्रहार प्रचण्ड पक्ष माथिको। यसको मतलब महरा निर्दोष छन् भन्न खोजेको हैन तर दोषी खोज्ने काम भयो भन्न कुनै अप्ठेरो छैन। प्रचण्डका होनहार नेताको चरित्र यसरि रंगाईयो सायद फेरी सफा हुन समय लाग्छ वा सफा हुँदै हुँदैन थाहा छैन।
यसको केहि समय पछि ओलीका दाहिने हात मानिने सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना-संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको घुस काण्ड सार्बजनिक भयो। ७४ करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनको पनि पद खुस्कियो। आरोप लगाउने बिजय मिश्र अहिले कता छन् पत्तो छैन तर ओली माथि राम्रै प्रहार भएको मान्न सकिन्छ। ७४ करोडको अडियो टेप सार्बजनिक हुँदा पनि उनीमाथि कुनै अनुसन्धान नगरिनुलाइ सरकारको ताकतको रुपमा हेर्न कठिन हुँदैन।
बास्कोटाको काण्ड सेलाएको केहि समय बित्दै छ अब पालो प्रचण्ड पक्ष तिरलाई पेल्ने हो। नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश अब भुमरीमा पर्ने अर्का नेता भएका छन्। सरकारको गल्ती देखाउने र प्रचण्डलाई हात लिदाको सजाय उनले पाए।
कोरोना संक्रमणबाट निधन भएका नेकपाका नेता कमान सिङ लामासंग विवाद गरेको उनको भिडियो अहिले खुबै भाइरल भएको छ। कमान सिङ लामाले स्वयम् मृत्यु अगाडी लेखेको स्टाटसमा घुमाउरो पारामा आफूमाथि छल भएको लेखेका थिए अहिले भिडियो सार्बजनिक भएपछी लामालाई घात भएकै रहेछ भन्ने अर्को समूह थपिएको छ। सामाजिक संजालमा छाएको छोटो भिडियो क्लिप हेरेर को सहि को गलत भन्न नसकेपनि करोडौको हिसाब नमिलेको र पैसाको विवाद भएको बुझ्न गाह्रो छैन।
नेकपामा कहिले कसको पालो कहिले कसको पालो घुमिफिरी रुम्जाटार भनेझैँ भएको छ। पार्टीको आन्तरिक बिबाद एकातिर छँदै छ नेताहरु एकले अर्कोलाई सिध्याउने खेलमा लागेका छन्। अहिले ओली र प्रचण्डबीच अघोषित युद्ध नै छ भन्दा फरक नपर्ला।
ओलीले आफुलाई गन्न छोडेपछि प्रचण्डले माधव नेपाल पक्षलाई हात लिएर ओलीबिरुद्ध वाक युद्ध गरिरहेका छन् तर ओली हार्ने र डराउने खालका नेता हैनन् उनी एक्लैले अहिले सम्म दुवै पक्षका नेतालाई आफ्नो अन्डरमा राखेका छन्।
ओलीले प्रचण्डलाई सत्तामोहीको आरोप लगाउदै आएका छन् भने प्रचण्डले ओलीलाई सामन्ती शासकको संज्ञा दिएका छन्। केहि समय पहिला त प्रधानमन्त्री बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावकै तयारी भएको थियो। आफु प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रचण्डले हदै सम्मको चाल नचलेका हैनन्। उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई आफु तिर तानेर प्रम बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न तयारी गरेको स्रोत बताउछ। यो रणनीति सफल नभएपछि यी दुइ अध्यक्षबीच अहिले पानि बाराबारको स्थिति छ।
एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने अनि आफ्नो -आफ्नो नेताको बचाउमा उनीहरु निकटका नेता लागिपर्ने यहि चलिरहेको छ नेकपामा अहिले। यहि अस्थिरताको कारण एक अर्काबीच दोषारोपण भैरहेको हो भन्ने अर्को थरि समूह छ। अब प्रचण्ड पक्ष नारायण काजीको बचाउमा लाग्नेछ। ओलीपक्ष आफुलाई केहि दिन सुरक्षित महशुस गर्नेछन।
निर्दोष साबित हुनु त छदैछ । नेकपाका नेता आफै अपराधी आफै न्यायाधिश हुन् यो समय । ओली नै नेकपाका सर्बोच्च न्यायाधिश हुन्। नेकपा भित्रका साना साना मुद्दा मिलाउन अदालत जानै पर्दैन ।
सर्बहारा बर्गका नेता आफु नै करोडौ,अरबौ ,खरबौको बार्गेनिङ्ग गर्दै बस्छन भने अब जनताले कसको अपेक्षा गर्ने ? श्रेष्ठको भिडियो बार्ताको बास्तविकता के हो अहिले प्रष्ट भैसकेको छैन तर कम्युनिष्ट पनि पैसामै मर्ने रहेछन भन्ने त प्रष्ट भैहाल्यो।
नेकपामा पछिल्लो समय देखिएको शृंखलाबद्ध बिबादको एउटा नमुना नेताहरु माथिको प्रहार हो। सामान्य मनमुटावबाट शुरु भएको झगडाले अहिले एक अर्कोलाई कसरि अन्त्य गर्ने भन्ने सम्मको रुप लिसकेको छ। विवाद समाधानका लागि नेकपाका केहि नेताहरु लागि नपरेका पनि हैन तर दुइ शीर्ष नेताले नै मुख मोडेपछि कसरि सम्भव होला र ?
एकअर्काका कटू आलोचक मानिएका केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले १७ असोज ०७४ मा गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्ने घोषणा गरेका थिए । यो धेरैका लागि ‘सरप्राइज’ थियो । कतिपयले भने यसलाई दुबैको स्वार्थ मिलेकाले हुन पुगेको मिलनको संज्ञा दिएका थिए । तर त्यो बेला आलोचकको मुख उनीहरुले पार्टी एकीकरण गरेर बन्द गरिदिए।
आलोपालोको प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको भन्ने प्रचण्डको एउटा अभिव्यक्ति बाट शुरु भएको वैमनस्यताले फुटको स्थिति सिर्जना गर्दैछ । शुरुमा प्रेमिल जोडी भनेर एकै ठाउमा उभिने दुइ नेता अहिले पुर्व र पश्चिम भएर बस्छन। पार्टी एकिकरणको सुरुवाती दिनहरुमा ओलीलाई दह्रो साथ दिएका प्रचण्ड बिस्तारै उनको कार्यशैली प्रति असन्तुष्ट हुँदै गए। त्यसैको फल स्वरुप आजभोलि उनीहरुबीच पत्र विवाद हुँदै आएको छ।
ओली पेलेरै भएपनि अघि बढ्ने स्वभावका मानिन्छन भने प्रचण्ड आफ्नो अल्पमत हुँदापनि सह-अस्तीत्व खोज्छन यहि बिषयमा दुइ नेताबिचको बिबादले अन्य नेता तथा कार्यकर्तामा नराम्रै असर परेको देखिन्छ। उनीहरु आफुलाई नेकपाका नेता कार्यकर्ता भन्दा पनि प्रचण्ड र ओली पक्षका भनेर छुट्टाएर हेर्ने गर्छन। यो एकिकरणको सबै भन्दा नमिठो पक्ष हो।
प्रचण्डले आफु नेकपाको पूर्ण अध्यक्ष भए ओलीलाई ५ बर्ष प्रधानमन्त्री बन्न दिने पक्षमा थिए तर ओलीले दुबैतिर आफुलाई मोलेपछी रुष्ट बनेका प्रचण्ड अझैपनि रुष्ट नै छन्।
अहिले ओलीले भनेको प्रचण्ड मान्दैन प्रचण्डले भनेको त झन् ओलीले सुन्दै सुन्दैनन्। यसरि हेर्दा लाग्छ नेकपा भित्रको यो बिबादले व्यक्तिको छबि माथि नै प्रहार गर्दै छ । उदाहरण महरा ,बास्कोटा ,श्रेष्ठ आदिलाई हेर्दा पनि पुग्छ। पालै पालो प्रहार भैरहेको यो अवस्थामा अब नेकपा भित्र कसको पालो आउने हो यो हेर्न बाँकी छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २६, २०७७, १३:४३:००